Ofii koleeraan maali, attamiin namarraa namatti darba? - BBC News Afaan Oromoo
Ofii koleeraan maali, attamiin namarraa namatti darba?
19 Waxabajjii 2019
Image copyright BDr Amir Aman
Dhibeen koleeraa tibbana Itoophiyaa bakkeewwan garaa garaatti mul'achuusaatiin wal qabatee jiraattoonni yaaddoo keessa galaa jiru.
Naannoolee biyyattii kan akka Oromiyaa, Amhaaraa, Tigraayiifi Somaalee akkasumas magaalota Finfinnee fi Dirre Dhawaa dabalaee namoonni 614 ta'an koleeraan qabamusaanii Inistitiyuutiin Fayyaa Uummata Itoophiyaa tibbana ibseera.
Hanga ammaattis namoonni lama dhukkubichaan lubbuu dhabunsaanii himameera.
Rakkinu yaachisaa ta'aa dhufe kana maqsuuf jecha, biyyattii nannoolee koleeraaf irra caalaa saaxilamoodha jedhamaniitti talaallii koleeraa kan afaanii kennamu kennuu eegalusaa Ministirri Fayyaa Dr Amiir Amaan karaa ergaa tiwitaraatiin ibsaniiru.
Finfinnetti mallattoon dhukkuba koleeraa mul'ate
Haqqeefi garaa kaasaan namoonni shan du'an
Itoophiyaan ammaan dura dhukkuba maqaan hin waamtu ture. Gabaasa fayyaa dhiyaatu keessatti haqqee fi garaa kaasaa jedhamee gabaafamaa ture.
Dhiyeenya kana dhukkubicha maqaadhuma isaatiin gabaasuuf kan aanga'oonni Itoophiyaa waliigalan.
Haalawwan koleeraaf nama saaxilan
Koleeraan baakteeriyaa vibiroo koleeraa jedhamuun dhufu yoo ta'u, yeroo baay'ee nyaata yookiin bishaan faalameen akka darbu himama.
Kana malees hanqina qulqullina dhunfaa fi naannoo, mana fincaanitiin alatti qulqullaa'uu, akkasumas mana fincaaniitti haalaan fayyadamu dhabuu akka ta'e, ragaan Inistitiyutii Fayyaa Ummata Itoophiyaa ni mul'isa.
Koleeraan attamiin darbaa?
Koleraan namaa dhukkubsataarra gara nama fayyaa qabutti haalawwan garaa garaatiin darba.
Karaawwan ittiin namarraa gara namaatti darbuun keessaa tokkoo karaa bishaan lagaa, burqiituu, kan ujjummoo ykn bishaan roobaa vaayirasii dhukkubichaatiin faalameen darbu danda'a.
Image copyright WHO
Sababoota dhukkuba kanaa gurguddaan:
• Nyaata fi bishaan faalame
• Harka sirriitti osoo hin dhiiqatiin soorachuu ykn nyaata bircheessu
• Soorata vaayirasii dhukkubichaan faalame soorachuu,
• Hirrina yookiin dhabamuu asiidii 'hypochlorhydria yookiin achlorhydria' kan garaa keenyaa keessatti argamu.
• Nama kooleeraan qabame waliin of eegannoo malee quunnamtii taasisuu,
• Foon dheedhii nyaachu,
• Fuduraa fi kuduraa dhedhii nyaachuu (kan dheedhiin nyaataman hin dabaltu)
• Qulqullinna ofii fi naannoo eeggachuu
• Bishaan qulqullu dhuguu
• Nyaata haalan bilchaate nyaachu
• Fuduraalee quunchiisuun nyaachuu danda'amu qofa nyaachu.
• Baasiisuufi haqqisuu
• Gogiinsa garaa
• Of wallaaluu
Walumaagalattis, wayiita mallattoonni dhukkubichaa isinitti dhagahame atattamaan gara mana yaalaa dhaquun ammo yeroon wallansa akka argattaniif isiin gargaara.
2 Waxabajjii 2019
Naannoo Amaaraatti haqqeefi garaa kaasaan namoonni shan du'an
31 Caamsa 2019
Akka idil-adduunyaatti Koleeraa balleessuuf waadaa yeroo jalqabaaf galame
Finfinneetti kanneen tiraanisformarii sagal hatan to'ataman